Ny mangarahara amin'ny IATA amin'ny fandoavam-bola izao any amin'ny tsenan'i Failandy, Norvezy ary Suède
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny mangarahara amin'ny IATA amin'ny fandoavam-bola izao any amin'ny tsenan'i Failandy, Norvezy ary Suède
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia nanambara fa ny Transparency in Payments (TIP) dia nampiharina tamin'ny tsenan'ny Failandy, Norvezy ary Suède. TIP, izay ampidirina miaraka amin'ny NewGen ISS, dia hetsiky ny indostria mifantoka amin'ny fanomezana zotram-piaramanidina miaraka amin'ny fitomboan'ny mangarahara sy fifehezana amin'ny fanangonana ny varotra vokariny ao amin'ny fantsom-pifandraisana. Mandritra izany fotoana izany dia ahafahan'ny mpiasan'ny dia manararaotra ny endrika fandoavam-bola vaovao amin'ny fandoavana ny volan'ny mpanjifa.
"Niova tanteraka ny tontolon'ny serivisy fandoavam-bola ankehitriny, ary mipoitra ireo mpilalao vaovao sy vahaolana amin'ny fandoavam-bola, manome safidy bebe kokoa an'ireo mpiasan-dia mba hamindra ny volan'ny mpanjifa amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Na izany aza, mandraka ankehitriny, ny zotram-pitaterana an'habakabaka tsy ampy fahitana amin'ireo fomba fandoavam-bola vaovao ireo. Hiatrika io olana io ny TIP, ka hiteraka fotoana vaovao ho an'ireo zotram-piaramanidina sy maso ivoho », hoy i Aleks Popovich, filoha lefitra zon'ny IATA, Serivisy ara-bola sy fizarana.
Tsy misy endrika fandefasana vola voararan'ny TIP, fa ny mpitsangatsangana dia tsy afaka mampiasa afa-tsy ireo endrika naneken'ny kaompaniam-pitaterana vola teo aloha. Ny zava-dehibe, raha manaiky ny kaompaniam-pitaterana iray, ny TIP dia mamela malalaka ireo mpiasan'ny dia hampiasa ny kara-bolany manokana. IATA dia niara-niasa akaiky tamin'ireo mpandray anjara amin'ny indostria manan-danja mba hampivelatra ny TIP hahazoana antoka fa manome izany:
Fampitomboana ny mangarahara sy ny fifehezana ho an'ny mpilalao tsirairay
Rafitra sy fitaovana mahomby ahafahan'ny maso sy ny seranam-piaramanidina hifanaraka amin'ny fomba roa ny fomba fampiasana Alternative Transfer, toy ny carte de crédit manokana sy ny kaonty virtoaly virtoaly (VAN), ho an'ny fandefasana vola mivantana amin'ireo kaompaniam-bola momba ny drafitra Billing and Settlement Plan (BSP) varotra
Rafitra famahana vahaolana izay mifanaraka tsara amin'ny fepetra mifehy sy ny tsena.
Eo ambanin'ny TIP, ireo mpamatsy Fomba hafa handefasana izay maniry handray anjara amin'ny fandefasana vola mivantana amin'ireo masoivohon'ny varotra BSP dia hiaraka amin'ny IATA ary hanome fampahalalana mifandraika amin'ny vokatra fandoavany. Ireo masoivoho sy zotram-piaramanidina dia hanana izany fidirana izany raha ilaina izany. "Manantena izahay ny hiara-hiasa amin'ireo mpamatsy Fomba fandefasana Alternative toa ny AirPlus International sy Edenred Corporate Payment, izay manohana ireo fotokevitra iorenan'ny TIP. Manantena izahay fa ny mpamatsy hafa dia hanolo-tena hisoratra anarana ny vokatra ao anatin'ny rafitry ny TIP raha vantany vao vonona ny tontolon'ny teknikan'izy ireo, handray anjara amin'ny mangarahara bebe kokoa eo amin'ny tontolon'ny seranam-piaramanidina sy ny maso ivoho, "hoy i Popovich.
Mandritra ny herinandro ho avy, ny TIP dia hampiharina any Islandy sy Danemarka (9 Mey), Kanada (16 Mey), ary Singapore (23 Mey), miaraka amina fanolorana heverina ho vita amin'ny tsena BSP rehetra amin'ny Q1 2020.
Lucky Weeks ”ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: Mandresy Jaguar
Ny vondrona Al Hokair dia manatsara ny fanitarana ny hotely Hotels & Resorts